Myagdi News - चिकित्सक लाइसेन्सको परीक्षामा ६८ प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तिर्ण - Myagdi News
चिकित्सक लाइसेन्सको परीक्षामा ६८ प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तिर्ण
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) ले लिएको चिकित्सक नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षामा ६८ प्रतिशत विद्याथी फेल भएका छन् । काउन्सिलले बिहीबारदेखि शनिबारसम्म लिएको एमबीबीएस र बीडीएसको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा शनिबार साँझ प्रकाशन गरेको हो ।
परीक्षामा सहभागीमध्ये ३१ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएको काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । परीक्षामा एक हजार चार सय ९४ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । सहभागी विद्यार्थीमध्ये ४७५ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । परीक्षाका लागि कुल १ हजार ५१६ जनाले फारम भरेको भएपनि २२ जना अनुपस्थित भएको र २ जनाको नतिजा रोकिएको डा. अधिकारीले बताउनुभयो ।
‘परीक्षामा एक हजार चार सय ९४ जना विद्यार्थी सामेल भएका थिए । यसपटक फेल भएका एक हजार एक सय विद्यार्थी पहिला पनि अनुत्तिर्ण भएका हुन्,’ डा. अधिकारीले भन्नुभयो,’ काउन्सिलले एउटा मापदण्ड तोकेको छ । त्यही अनुसार परीक्षा लिँदा धेरै विद्यार्थी फेल भए ।’हाल मुलुकमा जम्मा करिव ३० हजार १३३ चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता रहेकोमा करिब ८ हजार ८६२ बढी विशेषज्ञ चिकित्सकका रुपमा दर्ता छन् । अनलाइनखबरबाट